Powder Oxiracetam avo lenta no mahatonga ahy hahatsapa?
Inona ny atao hoe Oxiracetam?
Oxiracetam dia iray amin'ireo nootropic taloha kokoa fanampin-tsakafo avy amin'ny fianakaviana racetam. Io no fitambaran'ny racetam fahatelo taorian'ny piracetam sy aniracetam ary novolavolaina voalohany tamin'ny taona 1970. Ny Oxiracetam dia fihenan'ny simika amin'ny racetam, piracetam.
Toy ny racetams hafa, ny oxiracetam dia misy pyrrolidone ao anatin'ny fotony. Na izany aza, ny oxiracetam dia manana vondrona hydroxyl, izany no antony matanjaka kokoa noho ny fitambaran'ny ray aman-dreny, piracetam.
Fantatra amin'ny fahaizany manatsara ny fiasan'ny kognita toy ny fahatsiarovana, ny fifantohana ary ny fianarana ary koa ny vokatra manaitaitra omeny. Ny nootropics oxiracetam dia mampitombo ny fahasalaman'ny ati-dohanao amin'ny ankapobeny.
Vovoka oxiracetam: Inona no ampiasaina amin'ny Oxiracetam?
Misy karazany maro ny fampiasana oxiracetam notaterin'ny mpikaroka ary koa ny traikefa oxiracetam nozaraina tamin'ny sehatra samihafa.
Ny oxiracetam, toy ny racetam hafa dia ampiasaina hanatsarana ny fahalalana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fahaizana mamorona fahatsiarovana maharitra sy maharitra. Io no ampiasain'ny olona mila mianatra sy mahatadidy vaovao. Izy io dia tsara ho an'ireo mpianatra mila mivoatra amin'ny fanadinana, satria hanampy be azy ireo hianatra sy hitadidy fitaovana mora foana izany. Izy io koa dia manampy azy ireo hifantoka sy hifantoka mandritra ny fotoana lava kokoa.
Mampiasa Oxiracetam dia miavaka amin'ny fanolorana fanatsarana kognita ary manentana ny sainao hifantoka sy hiambina hatrany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny vokatra manaitaitra azy dia ny tsy fitoviana amin'ny stimulant hafa izay mamela olona mahatsiaro ho sadaikatra sy tsy milamina, oxiracetam dia handrisika ny saina ary hamela anao ho tony sy ho tony. Ho an'ireo mpiasa tena mila fifantohana sy fifantohana dia tsy azo ihodivirana ny traikefa oxiracetam.
Ny fikarohana dia manondro ihany koa ny fampiasana oxiracetam amin'ny fitsaboana ny fihenan'ny kognitika, ao anatin'izany ny fihenan'ny fahatsiarovan-tena amin'ireo marary voan'ny Alzheimer amin'ny alàlan'ny fiarovana azy ireo.
Rehefa miomana amin'ny resadresaka ohatra ny iray dia zava-dehibe ny hisehoana ho hendry. Ny Oxiracetam dia manatsara ny fahaiza-miteny izay manampy ny olona hampiasa voambolana lavorary izay manatsara ny fahafahan'izy ireo mametraka ny asany nofinofisiny.
Ny vovony Oxiracetam safidy ihany koa ho an'ny fanatsaràna tsiaro amin'ny zokiolona izay matetika mijaly noho ny fahaverezan'ny fahatsiarovana na ny fihenan'ny.
Satria tsy mamokatra oxiracetam irery ny vatantsika, mba hijinjana ireo tombontsoa azo avy amin'ny oxiracetam dia hoheverinao tsara fa mividy oxiracetam amin'ireo mpivarotra matoky. ?????
Ny ankamaroan'ny fikarohana ataon'ny olombelona dia mifototra amin'ny olona antitra sy olona tsy salama amin'ny ankapobeny, noho izany dia ilaina ny fikarohana bebe kokoa amin'ny olona salama hanamafisana ny fampiasana oxiracetam. Na izany aza, ny famerenana manokana ny oxiracetam dia mampiseho ny mety hisian'ny oxiracetam amin'ny tanora salama sy tanora.
Oxiracetam: Ahoana ny asany?
Raha, tombony azo avy amin'ny oxiracetam dia fantatra tsara fa ny mekanisma fiasan'ny asany dia mbola tsy faritana mazava tsara. Na izany aza, fomba fiasa oxiracetam maromaro no voalaza.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo mekanisma fiasa oxiracetam;
i. Manara-maso ny neurotransmitter, acetylcholine
Ireo neurotransmitter roa ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahafahantsika mamorona fitadidiana maharitra sy maharitra, fianarana ary ny fiasan'ny kognita amin'ny ankapobeny.
Ny oxiracetam dia mitaona ny rafitra cholinergic sy glutamate ary manamboatra ny famotsorana ireo neurotransmitters tena ilaina, acetylcholine ACh ary glutamate.
Manokana, oxiracetam dia mampitombo ny fahatsapana ny acetylcholine receptor. Izy io dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny proteinina kinase C (PKC) anzima izay mitaona ireo mpandray acetylcholine M1.
Ny oxiracetam nootropic dia aseho koa fa afaka manamboatra ireo receptorer simba ka miantoka ny habetsaky ny ACh mifandraika amin'ny asan'ny kognita.
II. Toetoetra mampientanentana ny saina
Ny nootropics Oxiracetam dia manolotra vokatra mampihetsi-po malefaka amin'ny rafi-pitatitra foibe.
Ny Oxiracetam dia latsaka ao amin'ny fianakavian'ireo ampakine misy fitambarana. Ampakine dia fantatra amin'ny fampiroboroboana fananana mampientanentana. Ny ampakine dia zava-mahadomelina izay mitaona ny receptor AMPA glutamatergic. Soa ihany fa tsy toy ny manaitaitra hafa toy ny kafeinina izay mamela anao tsy hatory sy hatahotra, ny ampakine dia tsy mamela anao hisy vokany ratsy hafa.
Oxiracetam noho izany dia manolotra vokatra mampihetsi-po izay mitazona anao ho mailo sy hifantoka hatrany eo am-pahatonga anao ho salama saina sy ho tony.
Ho fanampin'izany, ny oxiracetam dia afaka mampiakatra ny fôfôdôba matanjaka avo lenta izay mandray anjara amin'ny fampitomboana angovo sy manatsara ny fifantohana.
III. Modulate ny rafitra glutamate
Misy fiantraikany amin'ny rafitra glutamate ny oxiracetam ary avy eo mitaona ny famotsorana ny neurotransmitter, glutamate. Manolotra vokatra mahery vaika kokoa izy io ary mandritra ny fotoana maharitra.
Ny glutamate dia iray amin'ireo neurotransmitter be indrindra ao amin'ny rafi-pitabatabana izay matetika mandefa famantarana any amin'ny ati-doha sy ny vatana iray manontolo.
Ny glutamate dia mitana andraikitra lehibe amin'ny asa kognita ary indrindra izany amin'ny fahatsiarovana sy fianarana.
IV. Manatsara ny fifandraisana eo amin'ny neurons
Ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny oxiracetam dia manatsara ny fifandraisana eo amin'ny neurons ao amin'ny hippocampus. Hippocampus dia ny ampahany amin'ny ati-doha izay misy fiantraikany amin'ny fahatsiarovana, ny fihetsem-po ary ny rafi-pitabatabana afovoany.
Amin'ny fomba roa no ahatanterahan'i Oxiracetam izany. Ny iray dia amin'ny alàlan'ny fanentanana ny famotsorana ny asidra D-aspartic ary faharoa, amin'ny fiatraikany amin'ny metabolisma lipida. Ny metabolisma lipid dia manome antoka fa misy angovo ara-tsaina ilaina amin'ny fiasan'ny neurons.
Vokarena sy tombontsoa azo avy amin'ny oxiracetam
Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny oxiracetam voalaza na dia tsy ankatoavin'ny Food and Drug Administration (FDA) aza ny fanampiana.
Ireto ambany ireto ny tombontsoa azo avy amin'ny oxiracetam;
i. Manatsara ny fitadidy sy ny fianarana
Ny oxiracetam dia malaza tokoa noho ny fahaizany mampitombo ny fahatsiarovana. Manatsara ny famolavolana fahatsiarovana vaovao ary koa mampitombo ny hafainganana amin'ny fizotran'ny saina sy ny fitadidiany vaovao.
Ny oksiracetam dia manatsara ny fitadidiana ihany koa amin'ny fanalefahana ny fahasimban'ny neuron, ny fihenan'ny metabolisma lipid ao amin'ny ati-doha, ny fampitomboana ny rà mandriaka ary koa ny fanakanana ny fampidirana ny astrositosy.
Ny fikorianan'ny ra ao amin'ny faritra cerebral dia tena manadanja tokoa mba hahazoana antoka fa mahazo oksizena ampy ao amin'ny ati-doha ho an'ny fiasan'ny ati-doha, ao anatin'izany ny fahatsiarovana.
Ho fanampin'izany, ny fihenjanana amin'ny oksidana dia mety hitranga noho ny antony maro ary raha tsy voafehy dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny neuronal. Fanampiny oxiracetam tonga hamonjy amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fahasimban'ny neurônina.
Ankoatr'izay, ny oxiracetam dia soso-kevitra hanatsarana ny hery maharitra maharitra noho ny fitomboan'ny famoahana glutamate sy asidra aspartic ao amin'ny hippocampus.
Tamin'ny fandinihana olona antitra 60 manana fihenan'ny kognitika, ny fatra oxiracetam 400 mg intelo isan'andro dia hita fa manatsara ny fahatsiarovana ary mampihena ny soritr'aretin'ny fihenan'ny kognita.
Tamin'ny fanadihadiana iray hafa momba ireo zokiolona 40 voan'ny dementia, ny oxiracetam amin'ny 2,400 mg isan'andro dia hita fa nanatsara ny fotoana fohy fahatsiarovana ary koa ny fahaiza-miteny.
II. Mampiroborobo ny fifantohana sy ny fifantohana
Rehefa miatrika asa mila fitandremana feno mandritra ny fotoana maharitra dia mety ny oxiracetam no safidy tsara indrindra. Ny antsasaky ny androm-piainan'ny oxiracetam dia manodidina ny 8-10 ora ka afaka manome tombony maharitra.
Ny oxiracetam dia afaka manampy anao hifantoka amin'ny lahasa mandritra ny fotoana maharitra nefa tsy very ny fifantohana sy ny fifantohana. Ny oksiracetam dia mifandraika amin'ny famokarana angovo ao amin'ny atidoha, noho izany manome ny angovo ilaina mba hifantohana amin'ny asa mandritra ny fotoana maharitra ary koa ny hianarana zavatra vaovao mora foana.
Oxiracetam dia manolotra vokatra mampihetsi-po malefaka izay manampy anao hifantoka nefa tsy liana liana sy tsy hifantoka.
Nandritra ny fitsapana roa nataon'ny olona nahatratra 96 ​​ny zokiolona voan'ny dementia ary ny iray hafa nahatafiditra olona 43 izay nihena ny asany ara-pahalalana, ny fanampim-panafody oxiracetam dia hita hanatsarana ny fotoana fihetsehana ary koa ny fifantohana.
III. Vokatry ny neuroprotective
Ny fanampin-tsakafo oxiracetam dia manana tombony amin'ny neuroprotective satria afaka miaro ny fahasimban'ny endrika ati-doha sy ny fihenan'ny kognita vokatry ny taona na koa ny ratra amin'ny ati-doha.
Ny Oxiracetam dia afaka manolotra fiarovana amin'ny ati-doha amin'ny fahasimbana ateraky ny aretin'i Alzheimer ary koa aretina hafa.
Fikarohana biby maromaro no milaza fa mety hiaro ny ati-doha amin'ny fahasimbana ny oxiracetam. Ohatra, tamin'ny fanadihadiana iray izay nampidirana ny neurotoxins hanimba ny famoronana fahatsiarovana ho toy ny ratra mahazatra ao amin'ny ati-doha, dia hita ny fitsaboana mialoha amin'ny oxiracetam hisorohana ny neurotoxisity.
Ny fandinihana fanampiny dia nanambara fa, aorian'ny fitsaboana ny oxiracetam dia afaka miaro ny voalavo amin'ny fikorontanan'ny ischemika amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny tsy fetezan'ny sakana amin'ny rà.
Amin'ny fandinihana ataon'ny olombelona marary 140 voan'ny kapoka vokatry ny tosidra (fiakaran'ny tosidrà), oxiracetam dia notantanana niaraka tamin'ny a ny fototarazo (NGF). Ity fitsaboana ity dia natao hanampiana ny ati-doha hiverina sy hanatsara ny fahavelomana. Ny tatitra dia nitatitra mampihena ny fivontosana ary fanamafisana ny tanjaky ny hozatra izay marika famantarana ny fanarenana aorian'ny fahasimban'ny ati-doha.
IV. Manatsara ny fahatsapana fahatsapana
Ny oxiracetam dia misy fiantraikany amin'ny fomba fahitantsika ny zavatra amin'ny alàlan'ny fahatsapana dimy amin'ny fahitana, fofona, fikasihana, fandrenesana ary koa ny tsiro.
Rehefa mihinana oxiracetam ianao dia mampitombo ny fikorianan'ny ra serebral izay ahafahan'ny saina mamantatra sy mandamina tsara kokoa ary koa mandika izay hitantsika.
Ny fahatsapana ny fahatsapana ny fanatsarana dia midika hoe mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny fomba milamina.
v. Manatsara ny fahaiza-miteny
Ny oxiracetam dia aseho hampisondrotra ny asan'ny ati-doha ary afaka manatsara ny fahaiza-miteny. Ny fitenenana am-bava dia iray amin'ireo fiasa kognitive izay manampy anay haka vaovao avy amin'ny fahatsiarovanao.
Tamin'ny fanadihadiana ny olona 73 mijaly amin'ny dementia maro-maro (MID) na ny dementia degenerative voalohany (PDD), hita ny oxiracetam hisorohana ny fihenan'ny kognita ary koa nanatsara ny fahaizan'izy ireo miteny.
isika. Mampitombo ny fahamailoana
Ny miambina sy mifantoka dia ilaina amin'ny fiasa tsara indrindra. Ny Oxiracetam dia manolotra vokatra mampihetsi-po malefaka izay manampy anao hiambina hatrany amin'ny fampitomboana ny rà mandriaka ao amin'ny ati-doha.
Tamin'ny fandinihana olona 289 voan'ny dementia, hita ny oxiracetam hanatsara ny fiasan'ny kognita. Nolazaina ihany koa fa manatsara ny fahamailoana ary mampihena ny fanahiana sy ny fitaintainanana.
Powder Oxiracetam: Ahoana ny fomba fanao?
Miorina amin'ny fitsapana ara-pitsaboana ny doka omena oxiracetam dia 750-1,500 mg isan'andro. Ny fatra oxiracetam dia mizara roa fatra nalaina vao maraina sy vao harivariva.
Tokony hialanao ny fandraisana fanampim-panafody oxiracetam amin'ny hariva satria misy vokany manaitaitra malefaka izay mety hanakorontana ny torimasonao.
Koa satria ny solon'ny oxiracetam dia mety levona amin'ny rano dia azo alaina amin'ny endrika takelaka, kapsily na endrika vovoka mihitsy aza, na misy sakafo tsy misy.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny oxiracetam dia mitaky 1-3 ora eo ho eo hahatratra ny tampon'isan'ny serum ary noho izany dia tokony ho adiny iray alohan'ny asa kasaina hatao toy ny asa atao amin'ny fianarana. Ny antsasaky ny ain'ny oxiracetam dia manodidina ny 8-10 ora ary tokony antenainao ny hahatratra tampon'ny fampisehoana ao anatin'ny herinandro.
Na izany aza, ny fandalinana sasany dia nampiasa dosie oxiracetam ambony hatramin'ny 2,400 mg isan'andro, manomboka hatrany amin'ny fatra ambany indrindra mahomby izay miakatra raha ilaina izany.
Ankoatr'izay, satria ny oxiracetam dia manatsara ny fahombiazan'ny acetylcholine ao amin'ny ati-doha, dia alao antoka fa amboary loharano choline tsara toy ny Alpha GPC na choline CDP. Izany dia hanampy anao hisoroka ny voka-dratsin'ny oxiracetam mahazatra aretin'andoha manokana noho ny tsy fahampian'ny choline ao amin'ny ati-doha.
Vokatry ny oxiracetam
Ny oxotacetam nootropic dia heverina ho azo antoka ary zakan'ny vatana tsara.
Na izany aza, misy ny voka-dratsin'ny oxiracetam izay voalaza fa misy;
Aretin'andoha- mitranga izany rehefa manadino ny fametahana oxiracetam miaraka amina loharano choline tsara. Ny aretin'andoha dia mitranga noho ny tsy fahampian'ny choline ao amin'ny ati-doha. Azo sorohina izany amin'ny alàlan'ny fakana oxiracetam stack miaraka amina loharano choline toy ny Alpha GPC.
Ny tsy fahitan-tory sy ny fitaintainana dia voka-dratsin'ny oxiracetam. Voalaza izy ireo rehefa mihinana oxiracetam fatra ambony farafahakeliny ny olona iray na mihinana hariva ny hariva. Mba hanoherana ireo voka-dratsy ateraky ny oxiracetam dia raiso hatrany ny fatra atoro anao ary ataovy fahazarana ny mandray oxiracetam alohan'ny tolakandro mba hisorohana ny fikorontanan'ny torimaso.
Ny voka-dratsin'ny oxiracetam hafa mety misy;
Fivalanana na fitohanana, ary
Toro-hevitra avy amin'ny Oxiracetam
Ny vovony oxiracetam dia miasa tsara mba hanatsarana ny fahalalana sy hanentanana ny rafi-pitatitra foibe irery na miaraka amina famenon-tsakafo hafa.
Toy ny racetams hafa ihany, ny stack Oxiracetam miaraka amina loharano choline dia tena zava-dehibe. Ny fametahana azy amin'ny Alpha GPC dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny vokany fa manampy koa amin'ny fisorohana ny aretin'andoha izay mifandraika indrindra amin'ny tsy fahampian'ny choline ao amin'ny ati-doha.
Ny fatra oxiracetam alpha GPC stack dia 750 mg ny oxiracetam ary 150-300 mg ny Alpha GPC alaina amin'ny fatra roa, ny maraina sy ny tolak'andro.
Noopept dia iray amin'ireo nootropics tsara indrindra fantatra amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny kognita amin'ny ankapobeny ary miasa mitovy amin'ny racetams.
Rehefa manangona oxiracetam miaraka amin'ny noopept, antenainao ny hiaina fiasan-kognita bebe kokoa ao anatin'izany, fahatsiarovana, fianarana, fahamailoana, antony manosika ary mifantoka mihitsy aza.
Ny fatra mahazatra an'ity stack ity dia 750ir oxiracetam ary 10-30 mg noopept, alaina isan'andro.
-nifiram oxiracetam stack
Unifiram dia fitambarana nootropic nalaina mba hanatsarana ny fahalalana ary izay firafitry ny simika dia mitovy amin'ny an'ny racetams. Na izany aza, tsy ampy ny fitsapana ara-pitsaboana ary sarotra ny milaza izay mety hipetraka tsara aminy.
Saingy indray, satria miasa mitovy amin'ny racetams, ny unifiram stack miaraka amin'ny racetams, anisan'izany ny oxiracetam, dia mety hiteraka fihenan'ny kognita. Izy io dia voalaza fa matanjaka kokoa noho ny racetams ary noho izany dia fatra ambany indrindra no takiana mba hahatratrarana ny vokany.
Miorina amin'ny fanandramana unifiram sy oxiracetam manokana ny fatra dia tokony ho 5-10 mg unifiram sy 750 mg oxiracetam nalaina isan'andro.
-Oxiracetam sy Pramiracetam Stack
Ny oxiracetam dia mametraka racetams hafa tena tsara.
Rehefa mampiasa oxiracetam stack miaraka pramiracetam, ny fiasan-tsaina amin'ny fahatsiarovan-tena, ny fifantohana ary ny antony manosika dia mihombo ary koa ny vokatrao dia mety hitombo.
Ny voka-dratsin'ny oxiracetam dia manatsara ny fientanentanana sy ny fifantohana noho ny fihenan'ny angovo ara-tsaina.
Ny fatra natolotra ho an'ity stack ity dia 750 mg oxiracetam ary 300 mg pramiracetam nalaina indray mandeha isan'andro. Ny oxiracetam dia azo raisina amin'ny vavony foana satria tsy voavaha ny rano raha toa kosa ny pramiracetam dia azo ampidirina amin'ny sakafo voalohany satria famenon-tsolika azo vonoina.
Aiza no hividianana oxiracetam
Ny oxotacetam nootropic dia mora azo amin'ny Internet. Raha mieritreritra ny handray oxiracetam ianao dia ividio amin'ireo mpivarotra nootropic malaza indrindra amin'ny Internet. Diniho ny fandinihana tsara ny momba ny vovoka oxidacetam, kapsily na endrika takelaka natolotra.
Ny fizahana traikefa oxiracetam zaraina amin'ny tranokalan'ny orinasa dia fomba iray hiantohana fa mahazo izay tadiavinao ianao.
Ny tsikera Oxiracetam ao amin'ny tranokala mpivarotra dia mpanokatra mason-tsivana ho an'ny nootropics oxiracetam tsara indrindra satria tsy ny rehetra no hanolotra vokatra avo lenta.
Dysken, MW, Katz, R., Stallone, F., & Kuskowski, M. (1989). Oxiracetam amin'ny fitsaboana ny dementia maro-infarct sy ny dementia voalohany mihena. Ny Gazety momba ny neuropsychiatry sy neurosciences klinika, 1(3), 249-252.
Hlinák Z, Krejcí I. (2005). Ny oxiracetam mialoha- fa tsy aorian'ny fitsaboana dia nanakana ny tsy fahampian'ny fanekena ara-tsosialy novokarina tamin'ny trimethyltin amin'ny rat.Behav Brain Res.
Huang L, Shang E, Fan W, Li X, Li B, He S, Fu Y, Zhang Y, Li Y, Fang W. (2017). Ny S-oxiracetam dia miaro amin'ny famelezana ischemika amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny tsy fahatomombanan'ny sakana amin'ny rà amin'ny rat.Eur J Pharm Sci.
Maina, G., Fiori, L., Torta, R., Fagiani, MB, Ravizza, L., Bonavita, E., Ghiazza, B., Teruzzi, F., Zagnoni, PG, & Ferrario, E. (1989 ). Oxiracetam amin'ny fitsaboana ny dementia degenerative voalohany sy multi-infarct: fandinihana roa-jamba, voafehy amin'ny placebo. Neuropsychobiology, 21(3), 141-145.
Rozzini R, Zanetti O, Bianchetti A. (1992). Ny fahombiazan'ny fitsaboana oxiracetam amin'ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny kognita faharoa amin'ny fahaverezan'ny degenerative voalohany. Acta Neurol (Napoli).
Sun, Y., Xu, B., & Zhang, Q. (2018). Ny fivoaran'ny kozatra dia mitambatra amin'ny Oxiracetam amin'ny fitsaboana hemorrhage cerebral hypertensive. Gazety siansa momba ny siansa any Pakistan, 34(1), 73-77.
1.Inona ny atao hoe Oxiracetam?
Vovoka 2.Oxiracetam: Inona no ampiasaina amin'ny Oxiracetam?
3.Oxiracetam: Ahoana ny asany?
4.Oxiracetam effets & tombontsoa
5.Oxiracetam Powder: Ahoana ny fomba fatra?
7. Oxiracetam stacks toro-hevitra
8.Aiza no hividianana oxiracetam